ယခု HAMPTONS ရှိ NEST SEEKERS နှင့်အတူစျေးအကြီးဆုံးအိမ်များ - သတင်း
ဤသည်များသည် Hamptons ရှိ Nest Seekers နှင့်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောစျေးအကြီးဆုံးအိမ်များဖြစ်သည်
အခုလူတိုင်း Netflix အဖြစ်မှန်ပြပွဲ Million Dollar Beach House အသစ်ကိုချိတ်ဆက်နေပြီ။ စီးရီးသည် Nest Seekers တွင်လုပ်ကိုင်ပြီး Hamptons တွင်အခြေစိုက်သည့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များကိုတင်ပြသည်။ သူတို့သည်ထိုဒေသရှိဈေးအကြီးဆုံးအိမ်များကိုကြီးမားသောကြွယ်ဝသောဖောက်သည်များအားရောင်းချကြသည်။
ထိုအခါရဲ့ပြပွဲအပေါ်အိမ်သူအိမ်သားမယုံနိုင်စရာဖြစ်ကြ၏, အစစ်အမှန်ဖြစ်ကုန်အံ့။ လူတို့နေထိုင်ရန်တတ်နိုင်သောနေရာအချို့သည်စိတ်ထဲမှုတ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့စိတ်ကိုပိုပိုပြီးလွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင် Hamptons မှာရှိတဲ့ Nest Seekers International နဲ့လက်ရှိရရှိနိုင်တဲ့ဈေးအကြီးဆုံးစာရင်းများ။
$ 35million အတွက်အမှန်တကယ်လယ်ယာမြေ
သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၃၅ သန်းနှင့်သင်သည် Bridgehampton ရှိဤအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သည့်လယ်ယာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ အိမ်နှင့်၎င်း၏ ၂၂ acကရှိသောမြေကွက်များသည် Jimmy နှင့် Sara တို့နှင့်အတူလက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်အိပ်ခန်းလေးခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းသုံးခန်းပါရှိပြီးအကောင်းဆုံးဇိမ်ခံမြင်းစီးအဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
ဒါဟာပိုလိုကစားခြင်းအတွက်ရေကူးကန်, တင်းနစ်ကွင်းများ, နှစ်ခုကစားခြင်းလယ်ကွင်း, တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်မန်နေဂျာရဲ့ရုံးများနှင့်ဝန်ထမ်းများအိမ်ယာရှိပါတယ်။
$ 28million တစ် ဦး ကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းခြေဝင်း
အကယ်၍ ကမ်းခြေသည်သင်၏အရာဖြစ်လျှင် Southampton ရှိ Westhampton သဲသောင်ပြင်မှဤမယုံနိုင်စရာကမ်းခြေအိမ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အိပ်ခန်းကိုးခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းရှစ်ခန်း၊ ရေကန်တစ်လုံး၊ ရေပူရေကန်၊ အနုပညာအားကစားရုံ၊ ရုပ်ရှင်ခန်းနှင့် living ည့်သည်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများနေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်များရှိသည်။
Nest Seekers ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းသည်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏အထွတ်အထိပ်အဖြစ်ဖော်ပြသည် - ၎င်းသည်ပင်လယ်အားဖြင့်သင်၏အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။
$ 23million အဘို့ဤသမိုင်းဝင်အိမ်ခြံမြေ
ဒေါ်လာ ၂၂,၇၅၀,၀၀၀ အတွက်သင်သည်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအိမ်ကို Southampton ရှိ ၀ ယ်ပြီးသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်အားလုံး၏ငြူစူခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အပြင်ပန်းကအရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ၎င်းတွင်အိပ်ခန်း ၁၀ ခန်းနှင့်စင်ကြယ်စွာရယ်စရာကောင်းသော ၁၄.၅ ရေချိုးခန်းပါ ၀ င်သည် - အိမ်တစ်အိမ်လုံးသည်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တူသည်။
Nest Seekers ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြသည်မှာ - privet နှင့်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်တံခါးပေါက်နောက်ကွယ်မှကွယ်ဝှက်ထားသည့် Southampton Village ၏အဓိကအိမ်ခြံမြေအပိုင်းအခြားအတွင်းရှိဤအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောတည်ဆောက်မှုအသစ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၁.၈ reကကျယ်သောမြေကွက်နှင့်ကျော်ကြားသော Landscape Architect Dean Gomolka ဒီဇိုင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောမြေနေရာများပါရှိသည်။
ဝင်ခွင့်ခန်းခန်းသည်ပုံမှန် living ည့်ခန်းသို့ ၀ င်ရောက်မျက်နှာကျက်များနှင့်ကြီးမားသောအုတ်ဖုတ်မီးဖိုများဖြင့်ဖွင့်သည်။ မီးဖိုချောင်တွင်စားသောခမ်းနားသောစားဖိုမှူးများနှင့်အတူအိမ်တစ်အိမ်လုံးတွင်ပါ ၀ င်သည့်စမတ်နည်းပညာဖြင့်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်ထားသည်။ ကြမ်းတမ်းသောစကျင်ကျောက်ကောင်တာများ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်နေရာများနှင့် Wolf, Subzero နှင့် Miele မှအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
ငါ့ကို instagram တွင်ငါ့ကိုမလိုက်သောသူကိုငါဘယ်လိုရှာရမလဲ
၎င်းတွင်လမ်းလျှောက်သောဗီရို၊ ရေကူးကန်၊ မီဒီယာခန်းနှင့်တင်းနစ်ကွင်းများရှိသည်။ စာရင်း Jimmy နှင့်အတူပါ
$ 22million များအတွက်မယုံနိုင်စရာကမ်းနားအိမ်
သင်ကပို့စကတ်၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်သင့်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်လျှင် Huntington Bay ရှိ $ 22million စာရင်းသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းငါးခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းရှစ်ခန်းပါ ၀ င်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သမုဒ္ဒရာတွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လှေသင်္ဘောကျင်း၊ ရေကူးကန်၊ တင်းနစ်ကွင်းများနှင့်ဥယျာဉ်အတွင်းရှိချစ်စရာကောင်းသောအိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါအိမ်ရှိသည်။
ဒေါ်လာ ၂၂ သန်းနဲ့ခေတ်မီနေတဲ့ဒီအိမ်ကို
မင်းနိုးပြီးတွေးဖူးလား။ ငါတနေ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆိပ်ခံတံတားကိုချစ်ချင်သောအရာကိုငါသိ၏ ? ကောင်းပြီ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဤရှစ်ခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းအိမ် ၁၆ လုံးသည်ကမ်းခြေပေါ်၌ကိုယ်ပိုင်ဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုဖြင့်ပါရှိသည်။ ထိုအက swanky ဟိုတယ်နှင့်တူ၏။
Nest Seekers ဝက်ဘ်ဆိုက်ကဤသို့ဖော်ပြသည် - ဤအံ့မခန်းဖွယ်ခေတ်သစ်အိမ်သည် ၃၆၀ ဒီဂရီသမုဒ္ဒရာနှင့်ပင်လယ်အော်ရှုထောင့်တိုင်းတွင်ရှိနိုင်သည်။ ဤသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေအိမ်သည် Westhampton သဲသောင်ပြင်ကျေးရွာ၏ဂုဏ်သတင်းဆိပ်ခံတံတားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့်နေရာတွင်တည်ရှိပြီးကမ်းခြေသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ စတုရန်းပေ ၁၄,၀၀၀ နီးပါးရှိသောဤအခန်းရှစ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၁၆ ခန်းသည်ဇိမ်ခံလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုသတ်မှတ်သည်။ တောက်ပသောသဘာဝအလင်းနှင့်ပြည့်စုံသည့်ခမ်းနားထည်ဝါသောခမ်းနားထည်ဝါသည့်လှေကားထစ်များကို ဖြတ်၍ ၀ င်ရောက်သောအသေးစိတ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ဘားareaရိယာ၊ အလွန်မြင့်မားသောစည်မျက်နှာကျက်များနှင့် LED မီးလုံးများရှိလှပသောlivingရိယာသို့လှေကားထစ်များကိုဝင်ပါ။ မြင့်မားသောအဆုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူအထင်ကြီးလေးစားစွာဒီဇိုင်းထားသောမီးဖိုချောင်၊ ကြီးမားသောပါးပျဉ်းနှင့်အတူတောက်ပနေသောမီးဖို၊ အံ့သြဖွယ်မျက်နှာကျက်အသေးစိတ်နှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏မယုံနိုင်ဖွယ်ရှုခင်းများကိုအပေါ်စီးမှမြင်သည့်နံနက်စာစားစရာများ။
ဤစာရင်း Peggy နှင့်အတူရှိ၏။ ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုနေရတာလဲဆိုတာကိုငါနားမလည်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလိုချင်တယ်။
$ 20milion အသစ်စက်စက်တည်ဆောက်မှု
ထိုအရာများထဲမှတစ်ယောက်မျှသင်၏စိတ်ကူးကိုမယူခဲ့လျှင် (သင်အဆင်ပြေပါသလော) တည်ဆောက်မှုအသစ်ကိုကန်ဒေါ်လာ ၁၉,၉၀၀,၀၀၀ နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ အိပ်ခန်း ၉ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၁၂.၅ ခန်းပါ ၀ င်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဓာတ်လှေကား၊ ပြဇာတ်ရုံ၊ အပန်းဖြေခန်း၊ အားကစားခန်းမ၊ ချွေးပေါင်းအိမ်၊ အနှိပ်ခန်း၊ ဝိုင်အခန်း၊ လသာဆောင်များ၊ ဘယ်ဟာရိုးသားဖို့ဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။
Hamptons ရှိအခြားအသိုက်ရှာသူများစာရင်းအားလုံးကိုကြည့်ရန် ဒီမှာကြည့်ပါ
ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောကမ်းခြေအိမ်ကိုယခု Netflix တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက် Facebook ပေါ်က Netflix of Holy Church လိုပဲ။
• အဘယ်သူသည်အသိုက်ရှာဖွေသူများကိုပိုင်ဆိုင်? Million Dollar Beach House အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
• Netflix ရှိ Million Dollar Beach House ကိုကြည့်ရှုသူများမှလူမျိုးရေးခွဲခြားသူဟုခေါ်သည်
• ဤရွေ့ကား Sunset Selling တွင်ရောင်းခဲ့သောဈေးအကြီးဆုံးအိမ် ၁၀ လုံးဖြစ်သည်